एक व्यक्ति जसले प्रेमिकालाई मारेर मासु खाए...... | Nepal eNews - Nepali Online News Portal
यसरी चलखेलमा बढाइदै छ सेयर बजार
नेपालले कोरोना संक्रमणबिरुद्धको खोप ल्याउन आवश्यक तयारी तीब्ररुपमा अघि बढाउदै
अमेरिकामा मृतकको आँकडा तीन हजार पार, संक्रमित संसारकै धेरै
इटालीमा थामिएन कोरोनाबाट मृत्यु, मृतकको संख्या साढे ११ हजार पुग्यो !
गुल्मीमा बेवारिसे शव भेटियो
एक व्यक्ति जसले प्रेमिकालाई मारेर मासु खाए……
August 21, 2019 August 21, 2019 Nepal E News
६० वर्षीय पल ड्युरेन्ट १५ वर्षको जेल सजाय भोगेर भर्खरै जेलबाट छुटेका छन् । आफ्नो सजाय पुरा गरेर उनी जेल मुक्त भए पनि उनको मुक्तिलाई लिएर लन्डन काँपेको छ ।
जेलबाट छुटेका पल पूर्वी लण्डनस्थित एउटा फ्ल्याट बस्दै आइरहेका छन् । तर उनको अपराधलाई जान्ने र उनलाई चिन्ने आफन्त एवं छरछिमेक उनको रिहा प्रति कत्ति पनि खुसी छैनन् । उनीहरु पल बाँचुञ्जेल जेलमै रहुन ।
उनले त्यस्तो के गरेका थिए ?
उनी ब्रिटेनमा बस्थे । उनी लागुऔषध दुर्व्यसनी थिए । लागुऔषध सेवन गर्नकै लागि उनी चोरी र लुटपाट उत्रन्थे । उनको यियस्ता आपराधिक गतिविधि बढीरहेको थियो । उनी लुटपाटका दुई मामलामा फरार थिए । ब्रिटेनको पुलिस उनलाई दिनरात खोजिरहेको थियो । उनी भने भागेर स्पेन पुगे ।
त्यसक्रममा उनको करेनसँग भेट भयो । आफ्ना श्रीमानसँग सम्बन्धविच्छेद भइसकेकी ४१ वर्षकी करेन दुई बच्चाकी आमा थिइन् । उनी परिवारसँग अलग स्पेनको काल्पे शहरमा बस्थिन् । उनीसँग भेट भएको एक हप्ताभित्र पल करेन बस्ने बिल्डिङको माथिल्लो तल्लामा सरे
कुरा सन् २००४ को फेब्रुअरीको हो । करेन करिब हप्तादिनस¤म्म आफ्नो फ्ल्याटबाट बाहिर निस्किनन् । छिमेकीलाई शंका भयो । पुलिसलाई जानकारी दिए । पुलिसले करेनको फ्ल्याटको ढोका फुटाउँदा भित्र अत्यधिक रगत र रगत लत्पत्तिएका केही चक्कु छरपस्ट थिए । पुलिसले पलको खोजी शुरु गर्यो ।
अन्ततः उनी पक्राउ परे । उनले करेनको हत्या गरेको स्विकारे । करेनलाई हथौडाले हानेर मारेको र शवलाई स–सानो टुक्रामा काटेको पनि पुलिसलाई जानकारी दिए । साथै, उनको शरीरको खान मिल्ने अंग खाएको पनि उल्लेख गरे । करेनको शव भेट्न सकिएन । सुनुवाईको क्रममा उनका एकजना साथी पनि उपस्थित भएका थिए जसले पलले आफूलाई प्रेमिकाको हत्या गरेर उनको मासु खाएको बारे जानकारी दिएको बताए ।
करेनको हत्या आरोपमा पलललाई १२ वर्षको सजाय भयो । साथै चोरी र लुटको मामलामा उनले १५ वर्षको जेलमा बिताउनु थियो । सजाय पूरा भएपछि सन् २०१९ मा उनलाई स्पेनको जेलबाट रिहा गरियो ।द सनको रिपोर्ट अनुसार करेन परिवारले पल जेलबाट छुटिएपछि आफूहरुलाई निकै डर लागेको बताए । परिवारका अनुसार पलले आफ्नो अपराध कबुल गरेका थिए त्यसकारण उनलाई छोड्नु सही होइन ।
तपाइलाइ याे कस्ताे लाग्याे कमेन्ट गर्नहाेस् तपाइकाे कमेन्टकाे मुल्याङ्कन सबैले गर्नेछन्
तपाइपनि शेयर गर्नुहाेस्
समाचारएक व्यक्ति जसले प्रेमिकालाई मारेर मासु खाए !
रवि पत्नी निकिताले दिइन् चितवन प्रहरी प्रमुखसहित तीन जनाविरूद्ध जाहेरी
कालो गर्धनबाट चिन्तित हुनुहुन्छ ? अपनाउनुस् ५ उपाय
March 31, 2020 Nepal E News 0
अमेरिकामा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या तीन हजार नाघेको छ । जोन हप्किन्स युनिभर्सिटीको ताजा...
चैत्र १८, काठमाण्डौ । इटालीमा कोरोना भाइरस कोभिड १९ को संक्रमणले मृत्यु हुने क्रम अझै मत्थर...
March 30, 2020 Nepal E News 0
१७ चैत, गुल्मी । गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका-४ भगलाममा एक जना पुरुषको शव बेवारिसे अवस्थामा फेला परेको...
Web Design with 33% Discount offer
December 3, 2020 Nepal E News 0
धितोपत्र बोर्डले गरेको अध्ययनको निष्कर्ष सेयर मूल्य शतप्रतिशत वृद्धि हुनेमा जलविद्युत् समूहका २१, अन्य र व्यापार समूहका २/२, उत्पादन तथा प्रशोधन अनि वित्त कम्पनी समूहका १/१ कम्पनी छन् काठमाडौँ — सेयर बजारमा भएको उच्च वृद्धि स्वाभाविक नभई चलखेलबाट भएको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको एक अध्ययनले देखाएको...
काठमाडौं, १७ मंसिर । नेपालले कोरोना संक्रमणबिरुद्धको खोप ल्याउन आवश्यक तयारी तीब्ररुपमा अघि बढाएको...
‘एसईई रोकिएका विद्यार्थीलाई सिधै कक्षा ११ मा भर्ना गरौं’
कोभिड–१९: पछिल्लो २४ घन्टामा मात्र विश्वभरी १ हजार ३ सय ६६ जनाको मृत्यु !
युरोपमा तिब्र गतिमा फैलिँदै कोरोना महामारी, एकदिनमै ९ सय बढीको मृत्यु
‘लक डाउन’ भनेको के हो ?
कोराना सन्त्रासले २४ घण्टामा ९० हजारले छोडे काठमाडौं
फेसबुकमा लार्इक गर्नुहाेस्
Nepal E News
Nepal eNews Copyright © All rights reserved